Namuhla, wonke umbhangqwana ungabheka ngokuqondile ukukhulelwa. Nsuku zonke, kunezindlela ezintsha nezindlela zokuvimbela ukukhulelwa. Kodwa, ngeshwa, ayikho indlela eyi-100% yokuvikela ngokukhulelwa okungadingeki. Ngaphezu kwalokho, kunezinkolelo eziningi mayelana nokuthembeka noma izinkinga mayelana nokusetshenziswa kwendlela ethile. Kulokhu, sizokhuluma ngezindlela ezivame kakhulu nezithembekile zokuvimbela ukukhulelwa - amaphilisi okukhulelwa kanye nedivayisi ye-intrauterine.
Amaphilisi okulawula ukuzala
Inqubo yesenzo se-COC:
Iphilisi yokukhulelwa iqukethe inhlanganisela yama-hormone ocansini wesifazane (ama-COC noma ukuhlanganiswa kokubeletha komlomo). Ngokuphathwa kwansuku zonke kwe-COC, ama-ovaries asebenze kanye nokulinganisela kwe-hormone emzimbeni, okugcina ekuholela ekuvimbeleni ukuvuthwa kobuciko kanye nokukhululwa kwe-ovule (akukho ukuvuthwa kwenzeka) futhi ukukhulelwa kuyinto engenakwenzeka.
Izinzuzo zamaphilisi okukhulelwa:
Indlela enokwethenjelwa kakhulu yokuvimbela ukukhulelwa (ukuthembeka kuyi-99%).
Ama-COC angakhethwa kubesifazane namantombazane kunoma yimuphi ubudala, akekho iminyaka yobudala kubo. Yiqiniso, ngesigaba esithile sonyaka, kukhona "inhlanganisela" yabo ku-COC.
Hlanganisa futhi uzinze isizinda se-hormonal, uvimbele izifo ezisekelwe ku-hormone ezifana nomdlavuza noma i-polycystic ovary, i-endometriosis.
Yakha umjikelezo ojwayelekile wokuya esikhathini.
Nciphisa iphesenti ye-premenstrual syndrome, ukunciphisa ubukhulu bezinhlungu esiswini ngesikhathi sokuya esikhathini.
Umthelela wamaphilisi okukhulelwa ngesikhathi esisodwa kanye nokuphela kokuthola kwabo.
Uma unquma ukukhulelwa - emva kokuqedwa kwama-COC amathuba amaningi kakhulu.
Yiba nethonya elihle phambi kobucayi.
Ukungaziphathi kwamaphilisi okukhulelwa:
Ama-COC kufanele athathwe ngehora. Uma ungaphuthelwa ukuthatha ithebhulethi eli-1, amathuba okukhulelwa ayanda kakhulu.
Ngokuvunyelwa ngesikhathi esisodwa ngemithi ethile, umphumela ungancishiswa.
Ekuqaleni kokungenwa, ukubonakala kwebala kungabonwa phakathi komjikelezo.
Ama-COC angandisa ukondla, futhi abambe amanzi emzimbeni. Uma kungadingeki ube ngcono, kuyodingeka uqaphe ukudla nokuzivocavoca.
Emva kokuqedwa, kukhona ukwanda kokuzala futhi ungakwazi ukukhulelwa kalula.
I-COC imithi. Bona, kanye nayo yonke imithi inebufakazi bayo, ukuphikisana nemiphumela emibi, okumele ifundwe, iqale ukwamukelwa kwabo.
Kukhona ukukhanya okulula, okuyinto, ngesimiso somzimba wakwamanye amazwe, okuvimbela ukufakwa kwesqanda ekhushulwe emgqonyeni we-uterine mucosa. Futhi isimiso se-intrauterine se-hormonal senza ama-hormone asebenza kusayithi futhi ngemiphumela yawo evimbela ukusungulwa kweqanda.
Ukusebenza kwalendlela ku-75-80%.
Ngesikhathi sokulala ngokobulili, akusizi kahle.
Ayikho imiphumela emibi uma ifakwe kahle.
Ukulula ukusetshenziswa (eyodwa IUD ingasetshenziswa iminyaka 3-5).
Emva kokususwa, ukukhulelwa kungenzeka futhi.
Ngenxa yomzimba wangaphandle esibelethweni, kunamathuba aphezulu okugula okuvuthayo.
Ingozi yokukhulelwa kwe-ectopic ikwandisa ama-4.
Kunezinkinga nokufakwa kwe-IUD.
Yiziphi zezindlela zokuzivikela ozikhethayo, kubalulekile ukuthi unqume ngokucophelela ngabanye futhi ngesikhathi esisodwa uthintana nomjozi wezifo zomzimba ozohlola impilo yonke yowesifazane ngenkathi ehlola futhi enikeza izincomo ezifanele.
Ukusetshenziswa kokukhulelwa kuyithinta kanjani ukukhulelwa esikhathini esizayo?
Ungakugwema kanjani ukukhulelwa ngesikhathi sokuncelisa?
Ungabala kanjani izinsuku ongakwazi ukuzivikela ngazo?
Izindlela zokuvimbela ngokocansi
I-Belara: enye yezindlela zokubeletha ezingcono kakhulu
Imicabango engalungile ngokuphathelene nokukhulelwa
Ubuningi bezinyosi ngembewu yesame
UBoris Godunov-2, noma uKsenia Sobchak ulungiselela ukuqhuma
"Minute yenkazimulo" u-Renata Litvinova: amahlazo ngenxa ye-PR noma ukubheka okukhethekile ithalenta lomunye umuntu, ividiyo
Izimfihlo zobuhle nempilo yobuso, umzimba, isikhumba sezinwele
Izindwangu zendabuko zomsindo nezokuphephile
I-recipe esheshayo nelula ivala ama-truffles avela ku-actress u-Eugenia Brik
Ingxoxo noMarina Mogilevskaya
Indlela yokugoqa isikhwama esikhwameni kusukela ekuqaleni
Isaladi nenkukhu, utamatisi kanye noshizi oluhlaza okwesibhakabhaka
I-Biography ka-Alice Milano
Yidla kusihlwa futhi ungatholi fat!
Izinsana zokuqala: ukudla nokunakekelwa
Ama-cheekbones e-plastiki: izinhlobo, okuyinhloko yokuhlinzwa, ukuphikisana
Isithombe sokuqala-class: yini okufanele ugqoke ngo-September 1?